कम्तीमा चार साता लकडाउन गर्न सुझाव - Prateek Nepal
काठमाडौं । कोरोनाको नयाँ प्रजातिको जो’खिम कम गर्न कम्तीमा चार साता लकडाउन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले मानवीय क्ष’ति कम गर्न र सं’क्रमणको चक्रलाई रोक्न लकडाउन अहिले सहि समय भएको बताए । सरकारले किटान गरेका १४ वटा प्रभावित ठाउँमा लकडाउन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै शुक्रराज अस्पताल तथा सरुवा रोगका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले अहिल्यै लकडाउन गर्न सकिए सं’क्रमण फैलावटलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिने बताए ।
लकडाउन गर्नु अगाडि नागरिकका अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न डा. राजभण्डारीको सुझाव छ । काठमाडौंको परिवारसम्मै भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको बताउँदै उनले उपत्यकाका ३ जनामध्ये १ जनामा भाइरस पजेटिभ देखिएको बताए ।
भाइरसको नयाँ प्रकारको कारण युवा र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको बताउँदै उनले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरे । उनले केही समयका लागि तत्काल विद्यालयसहित भीडभाड हुने थलो बन्द गर्न पनि सुझाव दिए ।
राजनैतिक सं’कटपछि प्रधान सेनापतिले पृ’तनापतिहरुलाई दिए यस्तो निर्देशन
अन्तत : ४ वर्ष पछी काबुल आ’क्रमणका पी’डित नेपालीलाई सन्तुष्ट पारेर क्यानडा सरकारले गर्‍यो मिलापत्र
म कृषि क्षेत्रको चौकीदार हुँ, बदमासहरुलाई गेटबाटै तह लगाइदिन्छुः मन्त्री भुसाल